दिउँसोको ०२ : ३८
काठमाडौँ । कोभिड-­१९ को असर अन्य क्षेत्रमा जस्तै बैकिङ क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष रुपमा परेको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन जनताको विश्वास बढाउनु नै एकमात्र उपाय हो । सरकारले बजे टमार्फत तथा नेपाल ...
एनआईसी एशिया बैंकको होम लोन ४८ घण्टामा नै दिने
काठमाडौं, साउन २२ । एनआईसी एशिया बैंकले सर्वाधिक न्यूनतम ब्याजदर तथा प्रशासनिक शुल्कमा होम लोन उपलब्ध गराउँदै आएको छ। ‘सुपर चमत्कारिक घर कर्जा’ मार्फत ग्राहकले वार्षिक ८.२५ प्रतिशत ब्याजदर तथा मात...
प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि बैंकहरुबाट २० अर्ब खिच्दै राष्ट्र बैंक
baahrakhari.com . १ महीना अघि
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुबाट २० अर्ब खिच्ने भएको छ । बैंकहरुमा अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले २० अर्ब रुपैयाँ रकम रिभर्स रिपोमार्फत खिच्न लागेको हो । ७ दिन अवधि रहने रिभर्स रिपोमा ‘...
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक समस्याग्रस्तबाट हट्यो
nepalsamaya.com . १ महीना अघि
काठमाडौं– नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक समस्याग्रस्तको सूचीबाट हटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार समस्याग्रस्तबाट मुक्त भएको सूचना जारी गरेको हो। राष्ट्र बैंकले नारायणी बैंक ६ वर्षअघि समस्याग्रस्त ब...
बैंकिङ प्रणालीमा पैसा फालाफाल : आज फेरि २० अर्ब तान्दै केन्द्रीय बैंक
nepalipaisa.com . १ महीना अघि
नेपाली पैसा काठमाडौं : बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थप वृद्धि हुँदै गएपछि राष्ट्र बैंकले फेरि २० अर्ब रुपैयाँ खिच्ने भएको छ । बैंकले रिभर्स रिपोमार्फत बजारबाट आज बिहीबार (साउन २२ गते) २० अर्ब रुपैयाँ...
अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण
reportersnepal.com . १ महीना अघि
– कृष्ण अधिकारी काठमाडौँ, २२ साउन : कोभिड-­१९ को असर अन्य क्षेत्रमा जस्तै बैकिङ क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष रुपमा परेको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन जनताको विश्वास बढाउनु नै एकमात्र उपाय हो । सरकारल...
बैंकहरुमा धेरै पैसा थुप्रिएपछि राष्ट्र बैंकद्वारा लगातार तेस्रो पटक रिभर्स रिपो जारी
nepallive.com . १ महीना अघि
काठमाडौं-बैंकहरुमा 'अधिक तरलता' भएपछि ब्याजदर नियन्त्रणका लागि राष्ट्र बैंकले आज २० अर्ब रुपैयाँको रिभर्स रिपो जारी गरेको छ। यो साउन ८ गते यता लगातार तेस्रो पटक जारी गरिएको रिभर्स रिपो हो। दुई महिन...
एनआइसी एशिया बैंकको सुपर चमत्कारिक कर्जाबाट कति फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने बारे जाँच गर्न बैंकले ‘लोन बेनेफिट क्याल्कुलेटर’ सार्वजनिक गरेको छ । देशको बैङ्किङ इतिहासमै पहिलो पटक सुपर चमत्कारिक कर्जाबाट...
सात वर्षपछि समस्याग्रस्त सूचीबाट हट्यो नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक
काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले सात वर्षपछि नारायणी डभेलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त अवस्थाबाट हटाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको साउन ८ गतेको निर्णयअनुसार बैंकलाई समस्याग्रस्त अवस्थाबाट ससर्त फुकुवा गरि...
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक बल्ल तंग्रियो
नेपाली पैसा काठमाडौं : नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक समस्याग्रस्त अवस्थाबाट फुकुवा भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७० चैत २७ गतेदेखि यसलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । यस संस्थालाई ६ वर्षपछि समस्य...
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको कारवाही फुकुवा
काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको कारोवार फुकुवा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले उक्त बैंकको कारवाही फुकुवा भएको घोषणा गर्दे समस्याग्रस्त बैंकको सुचीबाट हटाएको हो । राष्ट्र बैंकल...